Sarkaal Dhinaca Amniga ah oo lagu Dilay Xerada Ifo
Mahad Maxamed Saacid oo ahaa sarkaal dhinaca amniga u qaabilsanaa xerada IFO, ayaa maanta waxa dilay dabley aan heybtooda la garaneynin. Ciidanka Ammanka Kenya, ayaa isla markiiba la geeyey goobtii uu dilku ka dhacay, hase yeeshee, ilaa iyo hadda ma jirto cid arrintaas loo qabtay.
Dhinaca kale, waxa wararku sheegayaan in afar u dhashay dalka Kenya iyo gaari ay wateen laga afduubay xuduudda Kenya uu la leeyahay Somalia, loona kaxaystay gudaha Somalia. Ilaa iyo hadda lama garanayo goobta la geeyey.
ugu dambeyntii, ciidanka Kenya iyo kuwa Somalia ee ku sugan deegaanka Kulbiyow ayaa toogasho ku dilay Dhaqane Jiirow oo ahaa dadka deegaanka. Dilka ayaa la sheegay in ciidamadani ay geysteen, iyaga oo ninkaas ku tuhmay inuu ururka Alshabab ka tirsanaa.
Wareysi dhameystiran oo arrinta ka hadlaya hoosta ka dhageyso.